Momba anay - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Afaka manome orinasam-panodinam-pananana any Shina izahay: anisan'izany ny fanangonana, famoahana entana, fanasoketana, fametahana marika, fonosana ary fitaterana ary rohy hafa. Manana trano fanatobiana entana folo sy mpiasa matihanina any Sina Atsinanana (Jiangsu, Zhejiang ary Shanghai) ary Shina atsimo (Delta Renirano Voahangy) izahay tsirairay avy. Raha mila vidiana amin'ny orinasa sinoa ny vokatrao ka alefa any amin'ny faritra hafa toa an'i Etazonia na Eoropa dia afaka manome serivisy mifanentana aminao izahay.
Tamin'ny 2014, ny paikadin'ny orinasantsika any Etazonia, Etazonia any Los Angeles, Atlanta, New York ary tanàna lehibe hafa fitaterana tanàna fitahirizana trano fivarotana any ivelany ary ny fananganana ny ekipan'ny logistikan'i Etazonia. Ny orinasa dia miantehitra amin'ny angona fampahalalana mahery vaika hanomezana mpanjifa andiana vahaolana logistik iraisam-pirenena, miankina amin'ny laza tsara sy serivisy kalitao hahazoana ny fanohanan'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny tamba-jotra iraisam-pirenena hamahana ny fitehirizana entana any Etazonia, ny fahazoana ny fadin-tseranana ary ny fandefasana ny "kilometatra farany" misy ny olana, ny fahatsapana an'i Etazonia mandritra ny fanaterana ny serivisy am-baravarana.
Fa maninona ianao no mifidy anay?
Ny tombotsoantsika dia:
1. Loharanon'ny OVS Warehouse ---- Manome ny fandraisana sy ny fandefasana, ny fanasoketana, ny fanoratana, ny palletization, ny fitehirizana fotoana fohy sns.
2. Fahaiza-manao fadin-tseranana matanjaka --- Manana brokers diteaux veteran izahay miaraka amin'ny fahatakarana lalina ny fitsipiky ny fadin-tseranana ao amin'ny firenena nafarana, miaraka amin'ny firaketana mazava momba ny ladoany.
3. Fahombiazan'ny fotoana azo antoka amin'ny FCL & LCL --- Nizaha ny tsipika fandefasana mahomby sy mahomby hahatratra ny takian'ny mpanjifa, manome serivisy varavarana ho an'ny mpanjifa Amazon manerantany, haingana, mora kokoa, mora vidy kokoa!
4. Safidio izahay dia tsy ho diso fanantenana ianao!